News - သမားရိုးကျဖမ်းဆီးသူများ၏အင်္ဂါရပ်များ
1. သွပ်အောက်ဆိုဒ် arrester ၏လက်ရှိစွမ်းရည်ကြီးမားသည်
ဤသည်ကိုအဓိကအားဖြင့်လျှပ်စီးဖမ်းဆီးသူများ၏အမျိုးမျိုးသောလျှပ်စီးမှု၊ စွမ်းအင်ကြိမ်နှုန်းယာယီ overvoltages နှင့် operating overvoltages များကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းတွင်အဓိကထင်ဟပ်သည်။ Chuantai မှထုတ်လုပ်သော zinc oxide arrester သည်လက်ရှိစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်သည်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည်သို့မဟုတ်တောင်ကျော်နိုင်သည်။ လိုင်းထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်၊ စွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်စွမ်း၊ ၄.၁၀ nanosecond မြင့်မားသောလက်ရှိသက်ရောက်မှုသည်းခံမှုနှင့် 2ms စတုရန်းလှိုင်းလက်ရှိစွမ်းရည်စသည်တို့သည်ပြည်တွင်း ဦး ဆောင်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သွပ်အောက်ဆိုဒ် arrester သည်လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး power system ရှိလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား overvoltage ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်သော protection performance ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဇင့်အောက်ဆိုဒ်အဆို့ရှင်ပြား၏ non-linear volt-ampere ၏လက္ခဏာသည်အလွန်ကောင်းသောကြောင့်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာသာမန်အလုပ်လုပ်သောဗို့အားအောက်သို့စီးဆင်းသွားသောကြောင့်၎င်းသည်အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းရရှိရန်အတွက်အကွာအဝေးမရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်လွယ်ကူသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပေါ့ပါးမှုနဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား။ အင်္ဂါရပ်။ Over-voltage ကျူးကျော်သွားသောအခါ valve plate မှစီးဆင်းသော current သည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာ over-voltage ၏ amplitude အကန့်အသတ်ရှိနေတယ်၊ ​​over-voltage ရဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်တယ်။ ထို့နောက်တွင်သွပ်အောက်ဆိုဒ်အဆို့ရှင်သည်မြင့်မားသောခုခံနိုင်သည့်အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသောကြောင့် power system သည်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်။
3. သွပ်အောက်ဆိုဒ် arrester ၏တံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းလှ၏
arrester ဒြပ်စင်သည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ပေါင်းစပ်အင်္ကျီကိုကောင်းမွန်သောအိုမင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်သောလေလုံနိုင်မှုတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်ခတ်ကွင်း၏ဖိအားကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကြွေထည်အင်္ကျီအားယုံကြည်စိတ်ချရသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်တံဆိပ်ခတ်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
the အမြင့်ဆုံးလေဖိအား arrester ပေါ်တွင်သက်ရောက်သည်
the Arrester ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ဝါယာကြိုး၏အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောတင်းမာမှုကိုခံနိုင်သည်။
5. သွပ်အောက်ဆိုဒ် arrester ၏ကောင်းသောပိုးသန့်စင်စွမ်းဆောင်ရည်
lass အမျိုးအစား II အလယ်အလတ်ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနေရာ - တွန့်လိမ်နေသောအကွာအဝေး 20mm / kv
⑵ ၃ အဆင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုcreရိယာ - ၂၅mm / kv တွန့်လန့်ခြင်း
IV အဆင့် IV၊ အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောလေထုညစ်ညမ်းမှု:ရိယာ - တွန့်လိမ်မှုအကွာအဝေး ၃၁mm / kv
6. သူသည်သွပ်အောက်ဆိုဒ်ဖမ်းဆီးသူများ၏မြင့်မားသော operating ယုံကြည်စိတ်ချရ
A. အ arrester ၏အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်;
အဆိုပါ arrester ၏တံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်။
ထိုကဲ့သို့သော single-phase grounding၊ long-line capacitance effect နှင့် load system တို့သည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် power frequency voltage မြင့်တက်လာနိုင်သည်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော amplitude ဖြင့် transient overvoltage ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ arrester သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း power frequency ကိုခံနိုင်သည်။ ဗို့အားတိုးစွမ်းရည်။
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -29-2020